Samson kɔɔ Gasa (1-3)
Samson ne Delila (4-22)
Samson tuaa Filistifo no so ka; owui (23-31)
16 Da bi, Samson kɔɔ Gasa, na ohuu tuutuuni bea bi wɔ hɔ, na ɔkɔɔ ne nkyɛn wɔ ne fi. 2 Ɛnna nkurɔfo kɔka kyerɛɛ Gasafo no sɛ: “Samson aba ha.” Enti baabi a na ɔwɔ no, wokotwaa ho hyiae, na wɔtɛw no anadwo no nyinaa wɔ kurow no pon ano. Wɔyɛɛ komm anadwo no nyinaa, na wɔkae sɛ: “Sɛ ade kye a, yebekum no.” 3 Na Samson daa hɔ kosii anadwo dasum. Afei ɔsɔree anadwo dasum, na okosoo kurow no apon ne n’apongua abien no mu, na otuu ɛne nnade a wɔde abram apon no akyi no nyinaa. Na ɔde too n’abati, na ɔde foro kɔɔ bepɔw a ɛne Hebron di nhwɛanim no atifi. 4 Ɛno akyi no, n’ani begyee ɔbea bi ho wɔ Sorek Bon* mu. Ɔbea no din de Delila.+ 5 Enti Filistifo ahemfo no baa ɔbea no nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Daadaa* no+ na hu ade a ɛma onya ahoɔden kɛse saa ne nea yɛyɛ a yebenya no akyekyere no, na yɛadi no so. Woyɛ saa a, yɛn mu biara bɛma wo nnwetɛbona 1,100.” 6 Bere bi akyi no, Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ: “Mepa wo kyɛw, kyerɛ me nea ɛma wunya ahoɔden kɛse saa, ne nea wobetumi de akyekyere wo adi wo so.” 7 Samson ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wɔde nhama* mono ason a ɛnwoe kyekyere me a, mɛyɛ mmerɛw na mayɛ sɛ onipa biara.” 8 Enti Filistifo ahemfo no de nhama mono ason a ɛnwoe brɛɛ no, na ɔde kyekyeree no. 9 Saa bere no, na wɔtetɛw ɔbea no dan baako mu, na ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Samson, Filistifo no aba wo so!” Ɛnna ɔtetew nhama no mu, sɛnea ogya ka asaawa a emu tew no.+ Enti wɔanhu baabi a n’ahoɔden no fi. 10 Ɛnna Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ: “Hwɛ! Woadaadaa me;* woanka nokware ankyerɛ me. Mepa wo kyɛw, kyerɛ me ade a wobetumi de akyekyere wo.” 11 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wɔde nhama akɛse a ɛyɛ foforo a wɔmfa nyɛɛ adwuma biara kyekyere me a, mɛyɛ mmerɛw na mayɛ sɛ onipa biara.” 12 Enti Delila faa nhama akɛse a ɛyɛ foforo de kyekyeree no, na ɔkae sɛ: “Samson, Filistifo no aba wo so!” (Saa bere no nyinaa, na nkurɔfo no tetɛw ɔdan no mu.) Ɛnna Samson tetew nhama akɛse no mu fii ne nsa ho te sɛ asaawa bi.+ 13 Afei Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ: “Woadaadaa me abesi sesɛɛ, na wonkaa nokware nkyerɛɛ me.+ Kyerɛ me ade a wobetumi de akyekyere wo.” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wode hama a wɔde nwene ntama nwene mmɛsa ason a ɛwɔ me ti so no bom a, wobetumi akyekyere me.” 14 Enti ɔbea no de paane nwenee mmɛsa ason a ɛwɔ ne ti so no boom, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Samson, Filistifo no aba wo so!” Na onyanee, na oyii paane no ne hama no. 15 Afei ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Wosɔre a wuse, ‘Medɔ wo,’+ nanso wonka wo koma mu asɛm nkyerɛ me. Eyi ka ho a woadaadaa me mprɛnsa, na wonkyerɛɛ me ade a ɛma wunya ahoɔden kɛse saa.”+ 16 Da biara, na ɔde asɛm no guan ne ho, na ɔteetee no. Afei de, na Samson abrɛ;* onyae a na anka wawu.+ 17 Enti afei de, ɔkaa ne komam asɛm nyinaa kyerɛɛ no sɛ: “Minyii me ti* da, efisɛ bere a wɔwoo me* ara na mebɛyɛɛ Nasirini maa Onyankopɔn.+ Sɛ miyi me ti a, m’ahoɔden nyinaa bɛkɔ, mɛyɛ mmerɛw na mayɛ sɛ onipa biara.” 18 Bere a Delila hui sɛ waka ne komam asɛm nyinaa akyerɛ no no, ntɛm ara na ɔsoma kɔfrɛɛ Filistifo ahemfo no,+ na ɔkae sɛ: “Afei de mommra, na waka ne komam asɛm nyinaa akyerɛ me.” Enti Filistifo ahemfo no baa ne nkyɛn, na wɔde sika no brɛɛ no. 19 Afei ɔbea no dedaa Samson wɔ ne nan so. Ɛnna ɔbea no frɛɛ ɔbarima no ma obetwitwaa mmɛsa ason no fii ne ti so. Ɛno akyi no, ɔbea no fii ase nyaa tumi wɔ no so, efisɛ na n’ahoɔden refi ne mu. 20 Afei ɔbea no kae sɛ: “Samson, Filistifo no aba wo so!” Ɛnna onyanee, na ɔkae sɛ: “Mepue awosow me ho na magye me ho sɛnea meyɛe kan no.”+ Nanso na onnim sɛ Yehowa nka ne ho bio. 21 Enti Filistifo no kyeree no, na wotutuu n’ani. Afei wɔde no kɔɔ Gasa, na wɔde kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn abien guu no. Na wɔma ɔyam hwiit* wɔ afiase. 22 Nanso bere a woyii ne ti no, ne ti nwi no fii ase fuwii bio.+ 23 Na Filistifo ahemfo no hyiaam, na wɔbɔɔ afɔre kɛse maa wɔn nyame Dagon,+ na wogyee wɔn ani. Asɛm a na wɔreka ara ne sɛ: “Yɛn nyame no de yɛn tamfo Samson ahyɛ yɛn nsa!” 24 Bere a nkurɔfo no huu no* no, wɔhyɛɛ wɔn nyame no anuonyam, na wɔkae sɛ: “Yɛn nyame de yɛn tamfo no ahyɛ yɛn nsa, nea ɔsɛee yɛn asaase+ na okunkum yɛn nkurɔfo pii no.”+ 25 Esiane sɛ na wɔn ani agye nti, wɔkae sɛ: “Monkɔfa Samson mmra na ommegyigye yɛn ani.” Na wɔkɔfaa Samson fii afiase hɔ bae sɛ ommegyigye wɔn ani; na wɔde no gyinaa adum no ntam. 26 Ɛnna Samson ka kyerɛɛ abarimaa a okura ne nsa no sɛ: “Ma memfa me nsa nka adum a ɔdan yi gyina so no na memfa me ho ntweri.” 27 (Saa bere yi, na mmarima ne mmea ahyɛ ofie hɔ ma, na na Filistifo ahemfo no nyinaa wɔ hɔ. Afei nso, na mmarima ne mmea bɛyɛ 3,000 wɔ ɔdan no atifi rehwɛ Samson a ɔregyigye wɔn ani no.) 28 Ɛnna Samson+ ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Nokware Nyankopɔn Yehowa, Awurade Tumfo, mepa wo kyɛw, kae me; mesrɛ wo, hyɛ me den+ prɛko pɛ yi, na mintua Filistifo no ka wɔ m’ani abien yi baako ho.”+ 29 Ɛnna Samson gyinaa adum abien a ɛwɔ mfinimfini a ekura ɔdan no mu no ntam, na ɔde ne nsa nifa soo edum baako mu, ɛnna ɔde ne nsa benkum nso soo baako mu. 30 Na Samson kae sɛ: “Ma me* ne Filistifo yi nwu!” Afei ɔde n’ahoɔden nyinaa piaa adum no, na ɔdan no dwiriw guu ahemfo no ne nnipa a wɔwɔ hɔ nyinaa so.+ Enti nnipa a okum wɔn ɛda a owui no, na wɔdɔɔso sen wɔn a okum wɔn bere a ɔte ase no.+ 31 Akyiri yi, ne nuanom ne ne papa abusuafo nyinaa bae, na wɔbɛfaa no kɔe. Na wokosiee no wɔ ɔda a wosiee ne papa Manoa+ wom no mu wɔ Sora+ ne Estaol ntam. Samson buu Israel atɛn mfe 20.+
^ Anaa “Dɛfɛdɛfɛ.”
^ Anaa “ntini.”
^ Anaa “Woredi me ho fɛw.”
^ Anaa “Samson kra abrɛ.”
^ Anaa “Oyiwan nkaa me ti.”
^ Nt., “efi me maame awotwaa mu.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ ohoni no.